3 akwụkwọ John Fante kacha mma
Bukowski sitere n'ike mmụọ nsọ wee zọpụta ekele maka onye ndụmọdụ a. John Fante enweworị ihe ahụ nke onye ode akụkọ ama ama na America butere oke mgbagha dị n'etiti narị afọ nke iri abụọ. Ọdịiche dị n'etiti ụzọ ndụ America na -aga nke ọma na ndò nke mmekọrịta ọha na eze; na…
3 akwụkwọ kacha mma nke Patricio Pron dere
Site na aha a na -echeta ngwa ngwa maka egwu ya, onye Argentine Patricio Pron bu n'obi ịbụ onye edemede ntụaka na narị afọ nke XNUMX a. Nna ukwu akụkọ na ọgbọ dị mma ma na -eme nri maka njikọ akụkọ a, dịka Argentine Samanta Schweblin ma ọ bụ Oscar Sipán gosiri n'ihi na ...
Ọnwụ nke Murat Idrissi, nke Tommy Wieringa dere
Onye odeakwụkwọ Dutch bụ Tommy Wieringa na -akpọbata anyị n'ime akụkọ gbasara ụmụaka ndị ahụ kwụsịrị na narị afọ nke XNUMX. Ndị mmadụ nọ n'afọ ọ bụla na -achọ ọdịnihu agọnarị. Echiche ochie nke oke dị ka ihe nzuzu kachasị, mgbe mmadụ nwere ike ịgọnarị ikike ...
Akwụkwọ 3 kacha mma nke Charles Bukowski
Nabata na ụwa nke Bukowski, onye edemede na-enweghị nkwanye ùgwù, onye edemede nke akwụkwọ visceral na-agbasa bile n'akụkụ niile nke ọha mmadụ (na-ewute ma ọ bụrụ na m dị oke "anya"). Ewezuga ịbịakwute amamihe a na nyocha ịntanetị dị ka «Charles Bukowski akpaokwu »nke ​​iji weghachi ọhụụ gị...
Ọgwụgwụ oge, nke Ignacio Martínez de Pisón dere
N'agbata Martínez de Pisón na Manuel Vilas enwere ihe mgbagwoju anya ederede gafere ndakọ ọgbọ. Ọ bụ ihe yiri ka ọ na -abanye n'ime akwụkwọ akụkọ ka ọ na -adịchaghị ahụ na akụkọ ugbu a. Kedu ihe m ma, ma eleghị anya ọ bụ ihe ntọhapụ na 80s, ...
Nwanne m nwoke, nke Alfonso Reis Cabral dere
Ọbara ọbara nke ịdị elu ya n'otu osisi ezinụlọ nwere ike mechaa ruo ebe mmiri na -eri. Cainism bụ usoro nke ihe nketa, maka oke agụụ ma ọ bụ maka anyaụfụ zuru oke ma ọ bụrụhaala na mmadụ nwere ebe nchekwa. Nwanne nwoke apụtaghị mgbe niile nghọta na ịma mma dị mma. ...
Claus na Lucas, nke Agota Kristof dere
Mgbe ụfọdụ ọnọdụ na -akpa nkata imepụta ihe pụrụ iche site na ahụ erughị ala ma ọ bụ ihe isi ike. N'ihe banyere Agota Kristof ihe niile gbakọrọ ka ọ ghara ide mpịakọta akwụkwọ akụkọ atọ a n'asụsụ mba ọzọ nke natara ya na ụgbọ elu ya site na Hungary ọhụrụ na -elekọta na nzuzo ...
Candela, nke Juan del Val dere
Site n'akwụkwọ akụkọ gara aga "Ọ dị ka okwu ụgha" nke nwere mkpụrụedemede onwe onye (mana ọ kpachapụrụ anya na ndụ ya), Juan del Val kpalitere ọgba aghara na ọnya na ngalaba dị iche iche, karịa akwụkwọ edemede. Mana nke ahụ bụ okwu ọzọ gbasara onye ekpughere oke ya zuru oke na ...
Bitna n'okpuru igwe Seoul, nke Le Clézio dere
Ndụ bụ ihe omimi nke nwere iberibe ncheta na amụma mmụọ nke ọdịnihu nke naanị ndabere ya bụ njedebe nke ihe niile. Jean-Marie Le Clézio bụ onye na-ese onyinyo ndụ ahụ etinyere na mkpụrụedemede ya kpebisiri ike ịkọwa ihe niile site na akụkọ ifo nke ụzọ ọ bụla bụ ...
N'ime ụgbọ ala maa ụlọikwuu, nke Ivan Jablonka dere
Mgbe ụfọdụ n'ụdị akwụkwọ dị nkenke na nkọwa ya na agile na mmepe ya, anyị na -ahụ onwe anyị na ịdị arọ nke ntụgharị uche miri emi. Nke ahụ bụ usoro nke Jablonka, n'agbanyeghị na ọ bụghị karịa ụdị ọ dị ka ọ bụ naanị ụdị ...